Outlook India Photo Gallery - Emmerson Mnangagwa
Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa, center with scarf, visits Chimanimani about 600 km south east of Harare, Zimbabwe. Mnangagwa visited a part of Chimanimnani affected by cyclone Idai and promised assitance in the form of food and rebuilding of homes. Hundreds are dead, many more missing and thousands at risk from massive flooding in Mozambique, Malawi and Zimbabwe caused by Cyclone Idai.
Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa addresses the media at his offices in Harare. Mnangagwa has set up a commission of inquiry into the killing of six people following military intervention in the capital two days after the election.
Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa delivers his speech during his inauguration ceremony at the National Sports Stadium in Harare. Zimbabwe inaugurated a president for the second time in nine months as a country recently jubilant over the fall of longtime leader Robert Mugabe is now largely subdued by renewed harassment of the opposition and a bitterly disputed election.
ZANU-PF supporters celebrate the victory of their candidate Emmerson Mnangagwa after Zimbabwe Electoral Commission chairwoman Qhubani Moyo announced the results of the presidential elections in Harare, Zimbabwe. Mnangagwa, of ZANU-PF party, was declared winner in the first vote after the fall of longtime leader Robert Mugabe.
Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa addresses a press conference in Harare. Zimbabwe's president says people are free to approach the courts if they have issues with the results of Monday's election, which he carried with just over 50 percent of the vote. President Emmerson Mnangagwa spoke to journalists shortly after opposition leader Nelson Chamisa called the election results manipulated and said they would be challenged in court.
Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa casts his vote for the presidential elections at the Sherwood Primary School in Kwekwe, Zimbabwe.
Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa addresses the final rally of his campaign at the stadium in Harare, Zimbabwe. Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa has promised a "thunderous victory" as he and main challenger Nelson Chamisa rally supporters one last time ahead of Monday's election.
Women hold portraits of Emmerson Mnangagwa at his presidential inauguration ceremony in Harare, Zimbabwe.
Emmerson Mnangagwa, center, is sworn in as President at the presidential inauguration ceremony in the capital Harare, Zimbabwe.
Emmerson Mnangagwa, center, arrives at the presidential inauguration ceremony in the capital Harare, Zimbabwe.
Emmerson Mnangagwa is sworn in as President at the presidential inauguration ceremony in the capital Harare, Zimbabwe. Mnangagwa is being sworn in as Zimbabwe's president after Robert Mugabe resigned on Tuesday, ending his 37-year rule.
Zimbabwe's President in waiting Emmerson Mnangagwa, greets supporters gathered outside the Zanu-PF party headquarters in Harare, Zimbabwe.